Dhibbane xumbo safarkii ugu dambeeyay ee hawada
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » Dhibbane xumbo safarkii ugu dambeeyay ee hawada
Jebinta Wararka Caalamka • France Breaking News • Jarmalka Jebinta Wararka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Wararka Hindiya • Investments • Wararka Cusub ee New Zealand • News • Wararka Burburinta Portugal • Dib-u-dhiska • Ammaanka • Wararka Singapore • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Imaaraadka Carabta • Wararka UK • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Heshiiska xayeysiiska xayeysiiska hawada ayaa la ilaaway iyada oo cibaadada Hinduuga ay ku qaataan quusin barakaysan wabiga Ganges Abriil 12
Cudurka faafa ee laga baqo COVID-19 wuxuu sii wadaa burburka dalxiiska iyo safarka adduunka oo dhan.
Hindiya ayaa soo warisay maalinteedii ugu xumeyd ee kiisaska cusub ee COVID-19 tan iyo markii masiibada ku bilaabatay iyadoo shalay la diiwaan geliyay 300,000 hal maalin kaliya.
Dowladaha adduunka waxay soo saaraan digniino xagga socdaalka ah oo looga baxayo kana imaanayo Hindiya Mareykanka ilaa Jarmalka iyo kuwo kale.
Maadaama isbitaaladu ay ka awood badan yihiin, oksijiinta sidoo kale waa gabaabsi iyadoo dadka qaar ay ku dhintaan isbitaalada maaddaama qalabka neefsashada dhammaaday
Dhibbanaha ugu dambeeya ee heshiiska xumbada safarka hawada waa heshiiska u dhexeeya Hindiya iyo Sri Lanka kaasoo ahaa inuu shaqeeyo laga bilaabo Abriil 26, 2021. Sida ay hadda tahay, taariikhdan dib ayaa loo dhigay sababta oo ah tirada sii kordheysa ee dhimashada Hindiya Fayruuska corona.
Dhibaatada COVID ee Hindiya ayaa sii xumaaneysa iyadoo ku dhowaad 300,000 kiis la soo sheegey shalay - wadarta guud ee hal maalin ugu weyn ilaa maanta. Dowladdu waxay isku dayeysaa inay u xaqiijiso muwaadiniinteeda in dadaal loogu jiro sidii loo xaqiijin lahaa oksijiin badan oo loogu talagalay hawo-mareenada maaddaama isbitaalada qaarkood ay leeyihiin 2 qof sariir kasta dadkuna ay u dhintaan maadaama oksijiinku ka dhammaanayo qalabka nool.
Dalka deriska la ah Sri Lanka wuxuu qorsheynayay inuu u duulo magaalooyin dhowr ah oo ku yaal Hindiya iyadoo Kushinagar ay tahay hal magaalo oo ay Hindiya si gaar ah u dooneysay in duulimaadyadu dib ugu soo laabtaan garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee dhowaan la casriyeeyay. Midhaha cusboonaysiintaan oo isu diyaarinaya inay qaabisho rakaabka ayaa hada hakad ku jira.